Hkristu hta tsawra ai Ginwang Up Wa Jau ni hte Nawku Hpung masha ni e, COVID-19 tsin-yam kawn makawp maga na matu Mungdan Asuya kawn nhtoi hpe May Shata 31 du hkra sharen da sai. Myitkyina Saradaw Sasana laika masat (D/MKN/057), nhtoi (21.3.2020) ndau da ai ndau shabra laika hpe, May 31, 2020 ten du hkra naw grin na lam Saradaw Rung kawn matsun ndau shangun ai hpe RVA kawn ndau shana ya dat ga ai.
ချစ်ခင်လေးစားအပ်ပါသော ကျောင်းထိုင်ဘုန်းတော်ကြီးများနှင့် ဘာသာသူ မိဘ ၊ညီအစ်ကို မောင်နှမအပေါင်းတို့ ကိုဗစ် ၁၉ ရောဂါပြန့်ပွားမှုကို ကာကွယ် တိုက်ထုတ်နိုင်ရန် နိုင်ငံတော်အစိုးရ မှ ကိုဗစ်ကာကွယ်တာစီးနိုင်ရေးအတွက် ပြဌာန်းထားဥပဒေ ကို မေလ ၃၁ ထိ တည်ဆဲ ထုတ်ပြန်ချက် အဖြစ် ထပ်တိုးထား သည်ဖြစ်ပါသဖြင့် မြစ်ကြီးနာ ဂိုဏ်းအုပ် သာသနာမှ ၎င်းနှင့်ပတ်သက်ပြီး စာအမှတ် D/MKN/057 ၊ နေစွဲ ၂၁၊ ၃၊ ၂၀၂၀ ထုတ်ပြန်ချက် မေ ၃၁ ထိ ၎င်းထုတ်ပြန်စာ တည်ဆဲဖြစ်ပါကြောင်း ဆရာတော်သာသနာရုံးမှ ထုတ်ချက်ကို RVA Kachin Service မှ တဆင့်အသိပေးကြေငြာအပ်ပါသည်။